China elu silica faiba glaasi ákwà rụpụta na Factory | Jiashun
The akwa silica akwa refractory eriri bụ ụdị akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ inorganic eriri. Ihe silica ya dị elu karịa 96%, na ebe dị nro ya dị nso na 1700 ℃. Enwere ike iji ya mee ihe na 900 ℃ ogologo oge. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na 1450 ℃ maka 10 nkeji, na worktable ka nwere ike ịdị mma na 1600 ℃ maka 15 sekọnd. Akwa silica refractory eriri akwa nwere àgwà nke elu ike, mfe nhazi na mbara ngwa. Enwere ike iji ya dị ka ihe na-eguzogide ọgwụ dị elu, nkwụsị na-eguzogide ọgwụ, mkpuchi mkpuchi na ihe mkpuchi mkpuchi na-arụ ọrụ nrụrụ dị ala, ezigbo nkwụsi ike kemịkalụ, arụmọrụ ọkụ eletrik dị mma, obere mgbatị ọkụ, ngwaahịa ndị na-abụghị asbestos, enweghị mmetọ na ezigbo usoro.
1. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara nkọwa nke ngwaahịa, ọnụahịa na ozi mbupu maka ngwaahịa ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye gị.
2. Ọ bụrụ na ọnụahịa na ọrụ anyị nabatara gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ihe nlele iji chọpụta ogo, n'ezie anyị nwere ike ịnye, ma eleghị anya ụfọdụ anaghị akwụ ụgwọ.
3. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na forwarder, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị forwarders ịhazi mbupu na-eme ka Mbupu were were.
4. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụta ma ọ bụ chọpụta mkpa dị ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ mepụtara ahịa anyị, anyị nwere ike ịchọọ ebe a ịchekwa ego na oge.
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị ma ugbu a, anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka ịchọta ihe ziri ezi na ahịa ndị ahịa ma bupu ha ọnụ, iji chekwaa ebubo maka ndị ahịa.
Q2: you nwere ike ịnye ihe nlele?
A: Ee, anyị nwere ike ịlele nlele ahụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Q3: Ogologo oge ole ka m ga-atụ anya inweta ihe atụ?
A: Mgbe ị kwụrụ ụgwọ nlele ahụ ma zitere anyị ozi anyị kwadoro, ihe atụ ga-adị njikere n'ime ụbọchị 7-10. The samples ga-ezitere gị site na awara awara na-abata na 3-5 ụbọchị.
Q4: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị?
A: Ọtụtụ mgbe 15-20 ụbọchị.
Q5: Gini bu usoro ugwo gi?
A: 30gachi 30% T / T n'ọdịnihu, itule tupu Mbupu.
Nke gara aga: Aluminum foil ákwà
Osote: vermiculite ntekwasa faiba glaasi akwa